A Special Force Unit of OLA Killed 9 and Wounded 5 - Ayyaantuu News
A Special Force Unit of OLA Killed 9 and Wounded 5 June 12, 2012 (Oromo Liberation Front) – A Special Force Unit of the Oromo Liberation Army operating in different parts of Oromia has continued its attack on enemy troops. Accordingly a Special OLA Unit killed 7 WoyaneEthiopian troops and wounded 4 in Northern Shoa zone Kuyyu County [Woreda] on June 4, 2012 by putting the enemy troops in a trap. The attacked enemy troop was said to have been dispatched to the area for the so called “search operation” of OLA. The Oromo population of the area have played a key role in the success of this attack operation. Meanwhile, another Special Force Unit of the OLA operating in the capital Finfinne (Addis Ababa) has killed 2 Woyane troops and wounded 1 in Gullalle area of the capital, County 8, Kebele 03 on June 05, 2012 around 7:30 PM local time when the enemy troops were recreating. OLF News –Oromoliberationfront.org
33 comments - What do you think? Posted by admin - 12/06/2012 at 6:01 am Categories:
33 Responses to “A Special Force Unit of OLA Killed 9 and Wounded 5”
Mortar says:	12/06/2012 at 6:57 am	Dhugaa yoo ta’eef, hedduu nama gammachiisa. Haata’u malee ani oduu akkanaa kana dhugaa ykn soba jedhee fudhachuuf nan mama. Sababiin isaa:1) Miidiyaalee addunyaa ka biroon maaliif hingabaafamne? 2) Waraanni kun walakkaa biyyaa keessatti dhuguma ka adeemsifame yoo ta’e ummanni naannoo tarkaanfiin fudhatame jedhmu kana jiraatan maaliif quba hinqabaanne? 3) Humna Woyyaanee maaliif dadhabsiisaa hindeemne?
Shakkii armaan olii kanan kaasu akkuma nafxanyootaa gocha ABO xureysuuf utuu hintaane jaalalaa fi mararfannoo ani ABO tiif qabu irraa ka’eenii? Dhabni kun nu jalaa dadhabaa adeemaa laata jedhee sodaan qabu irraa ka’eenii. ABO ilaalchisee gaaffiin sammuu koo keessa deddeebi’u kabiraan haala dhabichi miseensota haaraa itti malammalachaa jiru dha. Biyya keessaa fi alatti yaroo ammaa kana dhuguma dhaabni kun miseensota haaraa siyaasaa fi waraanaaf fudhachaa jiraa? Haala akkamiin? Fakkeenyaaf ani leenjii hidhannoo fudhachuun barbaada. kanan jiraadhu magaalaa Finfinnee keessa haala akkamiin dhaaba ABO waliin qunnamtii gochuu dandaa’a?
abbaa biftuu says:	12/06/2012 at 10:43 am	Nice try mortar
Dhugaa baasaa says:	12/06/2012 at 7:29 am	@Mortar, amma ati biyya jirtaa dhugaa dubbachuuf?…maal seetee website kun Ethiopia keessatti waan dhorkameeru natti fakkaata. Kan biraa callisamee akkanumatti miti naannoo jirtutti dhoksaan gurmaa’i, isa booda sochii qeerrootti makami… suuta suutaan dhimma ati leenjii hin fudhanneef hinjiru!!killeen har’uma buutee miilla hintaatu akkuma jedhamu sana.
Jabaadha says:	12/06/2012 at 7:36 am	Obbo Moortar yaada gaarii dhiheessite.Oduu ABOn tarkaanfii fudhatu akka yaada kiyyaa fi itti ilaalu yoo ta’e sabni Oromoo fira aduunyaa kana irraa dhabuu fi dantaa oromoof kan dhimmu dhabuu irraa hin dhagahamu.Kana ammoo kan dadhabiinsa fide keessattuu oromoota biyya alaa jiraatan keessaa warra waa barannee fi beekna jedhan irraati.Jarri qooda oromoo fi WBO akkasumas injifannoolee ABO dubbachuu fi afaan beekan maraan biyya lafaa irratti himachuu dhadeffachuu fi kiyya jedhanii fudhachuu irratti iji isaan jaamee,sammuun isaan xaxamee waan jiruuf aduunyaan dhagayuu hin dandeenye jedheen yaada.Oromoon lafa isaa irraa yeroo buqa’aa jirutti illee warri waa baranne jedhan dhanna isaanii irra hin yaa’u cal jedhanii ta’u malee waan isaan barreessanii morman tokko illee hin gartu. Rakkoon achi irraati.ABOn hojii siyaasaa fi waraanaa qindeessee gaggeessuu dha hojiin isaa natti fakkaata,hojicha ammoo kiyya jedheen kan dhadeefatuu fi himatu silaa nama waa hubate dha. warri waa himuu dandayu jedhaman sammuun isaanii jibbaa fi hinaaffaa qabsoo keessan gaadi’amee waan guddinaa fi fuula duree yaaduu hin dandaye.Kanaaf eenyu BBC fi CNN itti qooda WBO hima jettee yaadda ree. Akkasittin yaada.
Utubaa Lammii says:	12/06/2012 at 8:21 am	Oromoo hundaaf nagaan haa ta’u ! Loon abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsa akkuma jedhani osoo halagaatu tarkaanfii fudhachuu odeessee warri akka Moortar sagal itti dabalanii ykn dachaa godhanii haasa’u. Kanaafuu as website irratti olola hamilee qabsaawotaa cabsu dhiisii yoo dhugaa Oromoo taate dacheedhuma tarkaanfiin fudhatame sana dhaqii mirkaneeffadhu. Yaada keerraa kan hubatamu garuu ati madda ololaa diinaa malee dhugaa nama qabsoon Oromoo dhukkubsu hin fakkaattu.
Gadhummaa kee ammoo qabsoottin makamuu barbaada jettee odeessita. Dirreen oromiyaa baldhoodha hanga yoonaa maaf teesse baatee laga hin lixxuu? Oromoo keessa jiraachaa eega jiraattee Oromoonni naannoo kee jiran hagam itti tolee jiraatu? Sun maaf si hin quuqne? Lafa si qalanitti qabsaayota gangalchanii bakkuma jirtu nagaan jiraadhuu “Hamburger” kee fuffadhu ciisii, bakkuma jirtutti.
Qabsawaan ni kufa, qabsoon itti fufa, diinni dhabama, ni moona.
Boosuu says:	12/06/2012 at 8:45 am	Hagaa yoom ifsobuun jiraannasaa?!
rabbi isinitti haamul’isu yaa oromoo, rorroon diinaa jabaataa, dinni kaleessa rafe damaqaa, haalli addunyaa Qabsoof hedduu rakkisaataa’a hala deemu kana keysatti.. bara baraan oduuu sobaa ololuun amata 10 ol irra deddebi’anii Oromoo badii tokko dalaguun…humna Oromoo gargar facaasan..
oduu akkana silaa dhugaa ta’ee Midiyaan Adduynaa gabaasuudhaaf takkallee rakkoo hin qabdu.. kun dalagaa jaraati…
haatatu malee dubbiin.. waan deema jirtu.. yaada fi deggersa gargar faca’e hawatuuf jecha oduu dharaa omishanii midiyolee kansaani(Ayyaantuu.com) irratti gadhiisan.
karaan injifanno humna Oromoo tokkomsuu, irratti dalaguu malee.. oduu dharaan umurii fi aangoo dheerafachuuf yaaluu miti,,..ammallee daandii dogoggoraarra jirtan yaa warra “shanee” deebi’a!..nurra dhaabadhaa!
Nuti kan barbaannu tokkummaa ilmaan Oromoo, bakka hanqiinni jirtu dhugaatti uumta ifitti himanii dhibee irraa if fayyisuu malee akkanumaan amata 10 ol-oduu dharaa omishuu miti…
Oromoo says:	12/06/2012 at 10:53 am	Kun gammachuu keenya! Humni Oromiyaa hundhuura isaa dhuunfachuuf sochii inni gochaa jiru haalaan nama jajjabeessa! Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti leenjii waraanaa kan akka karatee,fi kungufuu faadhadhaa!Meeshaa waraanaa illee barbaadadhaa! Oromiyaa dhuunfachuun dirqama Oromoo maraa ta’eeti argama.Marti akka danda’een socho’uu wal ijaaruu,diina irratti tarkaanfii sodaa tokko malee fudhachuu danda’uu qaba.Hoggansaa fi gargaarsaaf WBO bakkanni jirutti barbaaduun quunnamuu feesisa.
Ergaan koo inni biraan humni wayyaanees ta’e humna habashaa biraa hamma Oromiyaa keessaa baatutti waraansi itti fufa.Humni habashaa kan biraanis miilla ishee Oromiyaa keessa keenyaan akkuma wayaaneetti itti dhukaafamuutu irra jira. Sabin Oromoos kana beekuun diina kaamuurrattuu qabsaa’uu fi qophaa’uu qaba.
Bilisummaan qabsoo hadhooftuu feesisa. Yoona yoona WBO birratti argamuun!WBOn yoo mijate reeffa diinaa suura kaasee ykn waraabee mullisuu illee yaaluu qaba.
Jamal Musa says:	12/06/2012 at 10:54 am	Boosuu Gogaa oromummaa uffattee qabsoofi qabsa’oota oromoo irratti yaada diigaafi maqa ballessi oofuu dhaabi. Kun oromoodhaaf bu’a inni buusuu hin jiru. Ati yookaan ergamituu wayyaaneeti ykn ammoo miseensa gartuu angoof bololtuu ti. Shaneen ati maqaa xureessitu qabsoo oromoo diina keessaa kan akka keetifi diina alaa marfamee jiru lubuu itti horee kan ofaa jiru dha. kanaafuu afaan kee sassabadhuu taa’i. Gaafaa aduun bariite maalummaan kee ni saxilamaa. Injifannoon ummata oromootiif. ni moona.
Boosuu says:	12/06/2012 at 11:38 am	Jamal Musa,
Malattoon keysan Oromoota qaqqalii maqaa balleessuu: gantuu, diina, kkf jachuun Oromoo dinoomsuu/halagoomsuu, ifii qulqulluu qabsawaa fi beeka if fakkessuu..
Amata dhufee dabru olola ololuu.. abo amma dadhabanne nuga’yee nurraa dhaabbadhaa!
kan kaleessa waliin qasookessatti waliin miidhamtan haraan tana isinirra yaadaan yoo adda ba’u Maqaxureessii guddaa irratti gaggeessuun ilmaan oromoo gargar facaaftan!…
Qabsoo saba bla’aa gaggeessuun dandeetti cimaa gafatti.. ololuu ololchiisurra
oromoliberationfront.org says:	12/06/2012 at 11:32 am	Dear OLF media and communication staffs,
Whenever the OLA attacked the enemy troops plz make it video
1.For hisorical record as liberary upcomings generation
2.To aquire the international media and attention.
for instace VOA,CNN,BBC…
Ganamo Caamsaa says:	12/06/2012 at 12:27 pm	Maqaan WBO OLOLA RAKASIIF TA’UUNI CUBBUUDHA.
Qabsoo hadhaawaa jaallan Oromoo kumootan irratti wareegame guyyaa tokko akka bilisummaa magarsiisu ilmi Oromo dhiigaan oromo ta’eef sammuuni bilisaa ni amannaasi abdii guutiisi itti qabna.Garuu Olola Farreen Qabsoo Oromo fi qabsawota Oromo dirree falmaa irraa fixii ficcisiise akka Wayyaanee Oromo lagaa gosaan qoodee tokko muuduuni kaani abaaree abaarsisu Shanee Asmaraa TV Eritea irraa qabsotti jirra jechaa ololudha.Shaneeni WBO Gatee bara 1999 Asmara Eritrea gale warra lukaan deeme achitti itti dhaqe maasaa Shabiyaa waggaa 12 tola qotee hamaa jira.WBO Oromiyaa jiru kaani ajjeesse kaanii harka kennachiise ni jirra jechuuf Qeerroo fi WBO humna addaa jedhee olola kuni soba qaanessaadha .Gaafa WBO baddaa gammoojjii Oromiyaa keessatti Wayyaanee raatessaa bayaa gala dhoorke 1ffaa ajaja hooggana ala tankaarfii fudhattan 2ffaa Adunyaan shororkeessa nuuni jetti jechaa Gootolii WBO meeqaa qawwee irraa hiiktan meeqaa ajjeeftan ,meeqa diinaaf saaxiltan har’a WBO keessan internet dha ” Akka itti sii raage agartee Raagni Namichaan jennaani Akka itti si Taajjabe ati argitee jedheen jedhama ” Kanaaf Mataan bofaa du’ullee uleen isaani ajjeesan fi bakki bofni itti du’e ni summoofti yeroo gabaabaafi .Garuu ni baddii Shanee yeroon irraa gabaabbataa jirti garuu summiini sii ammasi ni yaa’a yeroo xinnoofi.
Bilisummaa oromiyaaf tokkumman saba Oromof salphinni shanootaaf waani hin oolle !!!!!!
Safuu says:	13/06/2012 at 3:46 am	Obboo ganamo yoon silaalu ati nama miti udaan malee, ati namiichi waa hojjetee nyaachu hindandeenye kadhatuun , maqa shanee jetee yeroo hasooftu hinsaalfatuu? Garu yeroo dhi’hooti of’ajeestaa hiyuumaaniis si’ajeeseera wanaan enyumaake bekuufaan siti hima jira.
Jimma says:	12/06/2012 at 12:29 pm	Yoo danda’ame Video osoo qabaate gaaridha. “Video” akka salphaa hin taanes hubachu qabna. Maalif “video” mula’ate jechun motummadhaf kufaatti guddaadha. Kanaaf waan hunda gudha dhoksuuf. Yaallaamu qaba garu. Dinatti kan jabaatamu sadarkaa sadrakaanidha. Daddafani jabeessun garu kan ummataatti. Akkuma ONLF hujatu gochuun dirqama hunda keenyatti. Qabsoon akka wal hintakkaalle irratti biramachun bu’aa akka fidu hubaachaa jirra. Ummatni jala jalaa jabeessutti seena. Qaani guddaadhas WBOn humna ONLF gadi ta’uun.
Jabaadha says:	12/06/2012 at 7:08 pm	Dhiiro oduulee raadiyoo VOA fi kkf irratti darban yoom video fi suuraalee gaafattanii beektuu? silaa yoo video fi suuraa dhiyessuu ta’e raadiyoon biyya lafaa akka nu dhiyessu hiriira gallee gaafanna. aja’iba qabdu
Jimma says:	12/06/2012 at 8:08 pm	Yaada jabaadha. Amma midiyaa VOA afaan Amaaraan darbu waanta gaari yemmu hojjatan enasuma dabarfatu. Kan keenyas akkasuma ta’u qaba. Kan itti gamaddu ummata bal’aadha. Yoo danda’ame quratani dabarsun gaaridha. Yoo ta’u baates inuma darba. Fakeenyaf, ONLF loltu amana ajjesse jedha motummaaan Itoophiyaa garu soba jechaa jira jedhani dabarsaa jiru miti?. Jechuun wal bukkee qabani dabarsunis hin danda’ama jechuuf. Tarkaanfin akka bali’anaan adeemu heddu gargaara. Gochaan isa tokko isa tokko kakaasa, gargaaras. Inni tokko isa tokko argeetu ka’a.
Roobaa Durii says:	12/06/2012 at 8:41 pm	Maaloo yaa jarana hamma yoom walsobana ree? Kan kanaan dura maqaa ABO tiin dhumee fi ammas hidhaa jiru hanqateetii – hardha immoo waan hin qabneen ummata ajjeesisuuf Giddu-galeessa biyyaa keessatti “lolle” jettuu? Lakkaa yakka kana dhiisaa? Ummata keenya ficcisiisuuf malee nama tokkof lama ajjeestanii biyya walaba baaftan gonkumaa hin jiru. Sobaa oofaa jirtu. Adoolessaa fi Hagayya malee waraanni keessan hin lolu jechuudha? Oduu kan isinirraa bitu hin jiru!!!
Jimma says:	12/06/2012 at 9:45 pm	Kan fedhe jedhi. Enyutu nama tokko lama ajjeessun bilisummaan hindhufa jedhe. Tokko jedhaniiti lama jedhu akka ta’e hinuma beekta. Ykn jibiteeti ykn wallaalumaadha ykn ergeemtu diinati. Akka feetes yaaddu mirga. Jabaadhu. Furmaata yoof nufe keenite gaaridha. Yoo furmaata kennu dadhabde immo kan haga humna isaa yaalu itti bu’uun sirri miti. Kan fuldura keenya jiru, halagaa kallattin yaa xiyyeefannu malee oromoo danta ofii ari’u kan diinaaf ummata kennaa jiru umuriin isa gabaabataa jira. Bofi abaatu of maraa jedhe. Hundi gochaa diina arge damaqaa deema jeenna. Osuma beeku kan hamilee ummataa xuqu deeman garu deebin salphaadha. Baay’ee yaadullee hin barbaachisu. Kan biyya faranjii jirtutu rakkisa malee isa biyya jiru hoggana gubbaa ka’e haga dakaatti salphaadha. Maati ilaalameeti. Itti himama akka dhaaban. Ummata miidhu itti fufnaan garu namoota muraasaf jecha jireenyi ummata bal’aa hin gaaga’amu. ONLF fi Al Shebaab kan jabaatan tarkaanfi dinatti qofaa waan fudhataniif miti kan halagaaf taajaajilus balleessa waan deemanif. Oromoon garu garaa bal’ate ilaala.
Abdii Boruu says:	12/06/2012 at 11:21 pm	ABOn tarkaanfiin inni fudhachaa jiru hedduu namatti tola. Inni waa’ee ‘video’ gaafattu immoo yoo garaa qabaatte ati dhaqii waraabi malee WBOn akka kee ‘camera man’ miti. Akka kee oduu dhaaf yeroo hin qabu WBOn.
Mortar says:	12/06/2012 at 11:55 pm	Yaada oromoota asitti kennamaa jiru iddoo sadiitti qoodeen ilaala.
Garee 1ffaa. Ergamtoota habashaa ykn habashaa kanta’an ragaan jiraates dhibes gocha ABO hinfudhatan. ABO maqaa balleessuu fi xiqqeessuu irratti hamilee sabboontota oromoo caccabsuu irratti xiyyeeffatu. Fknf.kan akka Ganamoo Caamsaa, Boosuu
Garee 2ffaa. Sabboontota oromoo jaalala saba isaanii fi ABO’f qabanii irraa ka’anii dhugaas ta’u sobas ta’u cimina ABO qofa dubbachuu irratti xiyyeeffatan(Isaan kunis ragaalee quubsaa utuu hin argatiin waan jedhamu hunda amanu.). Fknf. kan akka Jimmaa
Garee 3ffaa. Sabboontota oromoo waan hojjetame jedhamu amanuuf maman/shakkan , sababa ragaalee quubsaa dhabuun. Ani garee kanattan ramadama. Waan addunyaa kana irratti ta’e jedhamee miidiyaadhaan lallabamu hunda(even BBC, VOA fi CNN illee taanan)sirrii dha jedhee battalatti amanuu hindanda’u. Maaliif yoo jedhame midiyaaleen hunduu dhugaa qofaaf utuu hintaane dantaa biyya, saba ykn garee tokkoo eeguuf kan hojjetan waan ta’eef.
Akkuman armaan olitti jedhe ABO’n jabaatee WBO’n cimee Oromiyaa akka bilisoomsu hawwu qofa utuu hintaane keessatti hirmaachuuf illee of qopheesseen jira. Gaaffiin koo fi sabboonota oromoo tokko tokkoo akkamitti ABO keessatti qooda fudhanna, dhaabichi eessa jira kan jedhu dha. Dhaabni kun hanga yoomitti akka afuuraa/ghost/ ta’ee jiraachuusaa itti fufa?
Mortar says:	13/06/2012 at 12:01 am	Dhugaa Baasa:
Wayitan yaada kana kennaa jiru kanan jiru biyya alaati. Haata’u malee kanan jiraadhu biyya keessa. Amma dhihootti biyyattan deeb’ee gala. ABO’n daandiitti itti miseensota haaraa heddumminaan argatu qiyyaafatee hojjechuu qaba.
Dhugaa baasaa says:	13/06/2012 at 1:58 am	Akkasan jedhe, akka gootu egaa….ABO’n suma mataakeeti….dhaqiii Qeerrootti makamii hojii cimsi. Hojiikeetu ABO sigodha malee akka dhaabaatti qofaa miti! carraa gaarii!!
Safuu says:	13/06/2012 at 4:18 am	Yaa mortar namni hunduu gowaa akaa ke miti? Ati udaani malee nama miti ati opdo digduu kamaal gantuu ti.
Mortar says:	13/06/2012 at 6:08 am	Safuu:
Maal akka jechuu barbaadde naaf hingalle. Gowummaan koo maalirratti? Anaan gowwaa siitiinn gamna akka jettu ka sidandeessise maali? Waan namaaf hingalle gaafachuun gowwummaa dha. Waanti ati udaan ykn OPDO ykn garee kamaal akka naan jettu si taasise maalinni? Kunoo rakkoon Oromoo inni guddaan isa kana. Akkanumaan ka’anii namaaf maqaa kennu. Ati na hinbeektu;anis si hinbeektu. Yaada kiyyas taanaan maqaa ati naaf kennite kan naaf kennisiisu miti.
Safuu: Ammas kaayyoon koo ifa akka siif taatu nan fedha. Ani walaboomu Oromiyaatti nan amana. Amanuu qofa miti haala naaf dandaa’ameen hunda kaayyoo kanaaf nan qabsaa’a. Armaan olittis waanti ani jedhe isa kana. Haala kamiin ABO argadhe waliin qabsaa’uun dandaa’a ka jedhu. Egaa ati maalirraa kaatee OPDO ykn Kamal Galtuu naan jechuuf feete.
Eenyummaa koo caalatti fedhuu yoo feete ilaalcha ani waa’ee Kamaal kennaa ture maqaa kiyya “Mortar” google search irratti katabii soqi. Waa argatta jedheen yaada.
Mortar says:	13/06/2012 at 6:12 am	sirreeffama/correction/:
Googliirratti “mortar” jettee katabuun waa’ee koo dubbisi kanan jedhe dogoggora;dhiifama. Websaayitoota armaan olitti liinkii ta’an ilaali.
Mortar says:	13/06/2012 at 6:15 am	Dhugaa Baasaa:
Qeerroos taanaan eessattan arga. Haala kamiin qunnamuun dandaa’aa?
Jimma says:	13/06/2012 at 6:41 am	Hi Mortar, Akka feetetti ramadi rakko hinqabu. Sirridha waanta hunda amanu miti. Sobani lakkofsa ammana ajjesne jedhani dubachuu hin danda’ama. Dhugaa isaa dubachuu wayya. Humna ammantane qabnuun namoota kudhanis ta’e isa gadis ajjessu hin danda’ama. Shiftaan tokko guyyatti meeqa ajjessu danda’a?. Waaye video kan jette motummaan nama video kaase yoo arge maal godha?. Ennasuma mana hidhaa galcha. Bara motummaa Dargii fi TPLF wal waraannan, gara lachu keessa namni hindhuma. garu, TPLF hojii adurree hojatti. Maal jechuuf?. Namni jalaa du’u dadafani awaalu, awaala dhoksu. Siyaasaf gaari miti. Kanaaf, TPLF yoo danda’ama dadafe akka “Video” hin kaane godha. Abba “video” kaase beeknanis enasuma mana hidhaa galcha.
ONLF ummata sumaaleen gargaarrama. Baay’inni ummataa isaani miliyoona shanii gadi. Hawaasni oromoo kan WBO gargaaru bay’naan ummata sumaalee oli male gadi miti. Maal jechuufin?. Osoo humna kaan hin dabalatin sadarkaa ONLF qaqabsiisu hin danda’ama. Hundi keenya yoo itti dabalamne garu yeroo isaa hin gabaabata. Dinnis firris WBO kabaja kenna jalatus jibbus. Ummata bal’aa garu itti boona.
Wal jibbun, hamilee wal cabsuun dinaaf daboo ba’udha. Sadarkaa sadarkaan guddachaa miseensaafi humna horatu. Ummatni kan biyya ambaa jiru qabsoo kanatti hawaasni biyya keessa jiru dandeetin, beekumsan ta’e, odeefanno kennunis ta’e qarshi gargaarun duuka bu’ee akka jiru hubachuudha. Adeemsan immo sochin qerro oromiyaa bakka hundatti akka babal’atu hojatama. Diinni qan qabdu qan dhistu wallaalti. Har’a, isa ummata miidhu tokkos-lamas yaa ta’u isaa olis yaa ta’u ajjeesaa deemu qabna. Caraan biraa hin jiru. Furmaata biraa yoo jiraate nutti hima.
Keenyuma says:	13/06/2012 at 6:50 am	Biyyee itti qotaa diina Oromo irratti rorisu.
Mortar says:	13/06/2012 at 6:58 am	Hi Jimmaa:
Yaadni kee armaan olii bayeessa. Anis injifannoo ABO fi WBO’n galmeessisan jedhame soba jechaa hiniru. Dhugaa jedhee fudhachuufis nan shakke. Shakkuu jechuun hamilee qabsaa’otaa cabsuu jechuu miti. Waan qabatamaan hojjetamaa jiru beekee qabsichatti seenuu waanan fedheef. Waa’ee qabsoo kanaa dhagahuu fi dubbachuu qofa utuu hintaane sadarkaa tokko ol guddadhee keessatti hirmaachuuf fedhii nan qaba. Kana gochuuf ammoo waanta qabatamaa ta’e hojii jaarmiyaan hojjechaa jiru beekuun narra jiraata. Har’a namni ykn gareen tokko kompiterarra taa’ee waan fedhe katabuu waan danda’uf soba ykn dhugaa jedhanii fudhachuuf hanga tokko nama rakkisa. Karaa adda addaa deeggartootaa fi miseensota akkasumas hawaasa addunyaa amansiisuu barbaachisa.
Gabaabaatti ABO fi WBO’n namoota haaraa akka koo fedhii qaban hirmaachisuuf karaa ifaas ta’e dhoksaan haala itti miseensota haaraa funaananii fi leenjisu hanga tokko beeksisuu qabu. Yoo kana hintaane dhaaba kana akkamitti guddisaa adeemuun dandaa’ama?
Jimma says:	13/06/2012 at 7:15 am	Dhuguma jette. Dura hundu sishakka. Adeemsan dhugaa ta’u hubata. Jabaatani itti fufu barbaachisa. Ummatni qondaala OPDO gaafa ajjessan amanu taananis hinuma danda’ama. Kan Tigree ajjesan, OPDO ajjessu hin rakkisu.
don't write fallacy says:	14/06/2012 at 9:39 am	Any one can express his opinions and ideads.
this can build education among us.
once you right please right in sophiscate .
Mortar says:	14/06/2012 at 3:02 pm	Dear don’t write fallacy:
Would U say more on your previous comment, please? I could not get what you intended to say by fallacy, ideads, sophiscate, etc.
Mortar ! says:	15/06/2012 at 11:47 am	IT is stands for you ,You will never get in to OLA to bell the cat epi TPLF?
I hope so thou are craven person.
If you pilpal like struggle you ‘re not write on the comment board.
Held on the gun now ingress oromian jungle !
Comment cannot bring freedom.
Ganamo Caamsaa says:	16/06/2012 at 12:34 pm	Safu jechuuni maqaa yoo baafattu silaa hiikkaa otoo beekte ture,Ganamo hiyyeessa jette galata rabbii qabaatani rabbi yaa kaafritcha waggaa dheera ofi bira tarree Shanee jiraachisaa turre silaa Harree fi Shaneen hin beektanii ,nama safuu qabutu silaa safuu beekaa.Kadhattu jettee nama hin beekne garuu yaada kee warra hin deeggarre maqaa baaftaaf yaa shanicha Safuu hin beekne Goojjee Shanichaa safuu hin beektani kanaafi kijibdu kajibni fi kadhaani Oromo biratti safuudha garuu shanoonni safuu hin beekani kanaaf nami shaniin qabsoo Oromo bakka buuna cheechuuni mana fi Ganda tokkotti dhiphatanii qabsoo Oromo shabiyatti gurguratani wsrra Safuu hin beekne yakkamtoota seenaa.Olola baseless dirree baye wayyaanee caala sobdu dhugaa isiniin jedha Shanota hanga Oromoni isini jibbe kani isini caala hubate hin jiru safu jettu malee safuu hin beektu silaa ija sooqiddani dhiqattanii hin kijbdanii ????
Ammasi duuti kani Shaneeti Bilisummaani fi tokkummaani Oromoof !!!